प्रअको सरुवा रोक्न विधार्थी र शिक्षकको आन्दोलन ! – Mission Khoj
प्रअको सरुवा रोक्न विधार्थी र शिक्षकको आन्दोलन !
प्रकाशित मिति: २०७५, पुष ९ गते सोमबार
वीरगंज । बीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको प्रअहरुको सरुवा रोक्न दवाव दिन विधार्थी र शिक्षकहरुले महानगर विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन ।
सोमबार विहानै देखी माईस्थान विधापीठका विधार्थीहरुले घण्टाघर अगाडी चक्का जाम गर्नुका साथै वीरगंज महानगरका मेयर विजय कुमार सरावगी विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन ।
महानगरले आठ वटा माध्यमिक विधालयका प्रधानाध्यापकहरुको सरुवाको विषयलाई लिएर महानगरपालिका अन्तर्गतको शैक्षिक अवस्था अहिले खलब्लिएको छ ।
महानगरपालिकाले राजनैतिक उदेश्यका साथ प्रअहरुको सरुवा गरेको भन्दै विधार्थीहरु सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षक संगठनहरुले दुई दिनकालागि महानगर अन्तर्गतका सम्पुर्ण सामुदायिक विधालयको पठन पाठन ठप्प गरेको छ ।
सरुवामा परेका प्रधानाध्यापकहरुले विधार्थीहरुलाई उचालेर आन्दोलन गराएको आरोप समाजिक संजाल देखी बीरगन्ज महानगरले लगाउदै आएको छ ।
सरुवामा परेका माइस्थान विधापीठका प्रअ बिनोद मेहताले विधार्थी आन्दोलनमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको बताए । प्रअ मेहताले महानगरका मेयर वीजय कुमार सरावगीले प्रअहरुको सरुवा गलत तरिकाले गरेको आरोप लगाए,मेयरलाई सरुवा गर्ने अधिकार छैन प्रधानाध्यापक मेहताले भने ।
बीरगन्ज महानगरका प्रमुख बीजय सरावगीले शिक्षक महासंघको निर्वाचनको मुखमा राजनैतिक उदेश्यका साथ चुनावलाई प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध रुपमा सरुवा गरेको शिक्षकहरुले आरोप लगाइ रहदा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरावगीले सरुवाको विरोधमा माईस्थान विधापिठका प्रअ विनोद मेहताले विधार्थीलाई उचालेर मेयर विरुद्ध प्रदर्शन गरेको आरोप लागेको छ ।
मेयरलाई भ्रष्टाचारी भनेर लेखिएको पलेकार्ड दिएर प्रअको सरुवा रोक्न दवाव दिने प्रधानाध्यापकहरु लाई कानुन अनुसारको कार्यवाही समेत गर्ने मेयर सरावगीले बताउनु भयो ।
प्रअहरुमाथी पछिल्ला दिनमा अख्तियार लगायतको नियामक निकायमा व्यापक मुद्दाहरु परेको र एउटा विधालयमामा लामो समय सम्म एउटै प्रधानाध्यापक बस्ने भएकोले प्रशासनिक वेथीती बढदै गएकोले कसैलाई अपायक नपर्नेगरि सरुवा गरिएको सरावगीले बताउनु भयो ।
सरुवा विरुद्ध लागने , छात्रछात्रालाई उचाल्ने प्रअहरुको पहिचान भइरहेको कार्यवाही प्रकृया समेत अगाडी बढेको बताउनु भयो । बीरगन्ज महानगरमा ९५ वटा सामुदायिक विधालय मध्ये १९ वटा मावि छन् ।
महानगर भित्र २० हजार १ सय ८५ जना विधार्थी सामुदायिक विधालयमा अध्यनरत रहेको त्यसका लागि ७ सय ५२ जना शिक्षकहरु रहेका छन् । तर महानगरको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरण कै निर्णय गर्दै बीरगन्जको शैक्षिक अवस्थाका साथै आमजनजिवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।